၇နှစ်ကြာပြီးမှ ပြန်လည်တွေ့ဆုံဖို့ အခွင့်အရေးရလာတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက် – Trend.com.mm
မင်းသားချော Lee Jong Suk နဲ့မင်းသမီးချောလေး Kim Ji Won တို့ကို မကြာခင်ရုပ်ရှင်တစ်ကား ထဲ ပြန်လည်မြင်တွေ့ရပါတော့မယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၇နှစ် “High Kick 3” ဇာတ်ကားပြီးကတည်းက အတူတူရိုက်ကူးတာတွေမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါက ပထမဆုံးသူတို့နှစ်ယောက် အတူရိုက်ကူးမယ့်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဧပြီ ၁၇ရက်နေ့က YNK Entertainment နဲ့ King Kong အေဂျင်စီနှစ်ခုလုံးက မင်းသားနဲ့မင်းသမီးဆီ ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားကမ်းလှမ်းမှုရောက်လာခဲ့တယ်လို့
အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။Netflix ကရိုက်ကူးမယ့်ကားဖြစ်ပြီး လောလောဆယ် ရုပ်ရှင်ကားနာမည်ကို “See You Again” လို့ပေးထားကြောင်းသိရပါတယ်။
နှစ်ယောက်လုံးက ဇာတ်ညွန်းကိုလေ့လာနေတုန်းဖြစ်ပြီး လက်ခံမယ်၊လက်မခံဘူးဆိုတာ အတည်မပြုရသေးပါဘူး။
“See You Again” ဇာတ်ကားဟာ အချစ်ဇာတ်လမ်းမျိုးဖြစ်ပြီး “Oh My Venus”ဇာတ်ကားရဲ့ ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ၂၀၁၁ ခုနှစ်က
“High Kick 3! The Revenge Of The Short Legged” ဇာတ်ကားမှာ အတူပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီတစ်ခါဇာတ်ညွှန်းကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင် ဒါက ၇နှစ်နီးပါး
ကြာပြီးနောက် ပထမဆုံး ပြန်လည်တွေ့ဆုံရိုက်ကူးမယ့်ရုပ်ရှင်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အခုလက်ရှိမှာတော့ Lee Jong Suk ဟာ Hymn of Death ဇာတ်ကားသစ်ကို ရိုက်ကူးနေဆဲကာလဖြစ်ပြီး မင်းသမီး Kim Ji Won ကိုတော့ မကြာသေးခင်ကမှထွက်ရှိခဲ့တဲ့ “Detective K: Secret of the Living Dead.” ဇာတ်ကားမှာမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
သူတို့နှစ်ယောက် ဒီဇာတ်လမ်းကိုလက်ခံရိုက်ကူးမလားဆိုတာတော့ နောက်ထပ်သတင်း တွေစောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦး။
မငျးသားခြော Lee Jong Suk နဲ့မငျးသမီးခြောလေး Kim Ji Won တို့ကို မကွာခငျရုပျရှငျတဈကား ထဲ ပွနျလညျမွငျတှရေ့ပါတော့မယျ။သူတို့နှဈယောကျဟာ လှနျခဲ့တဲ့ ရနှဈ “High Kick 3” ဇာတျကားပွီးကတညျးက အတူတူရိုကျကူးတာတှမေရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါက ပထမဆုံးသူတို့နှဈယောကျ အတူရိုကျကူးမယျ့ကားလညျးဖွဈပါတယျ။
ဧပွီ ၁ရရကျနကေ့ YNK Entertainment နဲ့ King Kong အဂေငျြစီနှဈခုလုံးက မငျးသားနဲ့မငျးသမီးဆီ ရုပျရှငျကားတဈကားကမျးလှမျးမှုရောကျလာခဲ့တယျလို့
အတညျပွုပွောကွားခဲ့ပါတယျ။Netflix ကရိုကျကူးမယျ့ကားဖွဈပွီး လောလောဆယျ ရုပျရှငျကားနာမညျကို “See You Again” လို့ပေးထားကွောငျးသိရပါတယျ။
နှဈယောကျလုံးက ဇာတျညှနျးကိုလလေ့ာနတေုနျးဖွဈပွီး လကျခံမယျ၊လကျမခံဘူးဆိုတာ အတညျမပွုရသေးပါဘူး။
“See You Again” ဇာတျကားဟာ အခဈြဇာတျလမျးမြိုးဖွဈပွီး “Oh My Venus”ဇာတျကားရဲ့ ဇာတျညှနျးရေးဆရာရေးသားထားတာဖွဈပါတယျ။သူတို့နှဈယောကျဟာ၂၀၁၁ ခုနှဈက
“High Kick 3! The Revenge Of The Short Legged” ဇာတျကားမှာ အတူပါဝငျရိုကျကူးခဲ့တာဖွဈပွီး ဒီတဈခါဇာတျညှနျးကိုလကျခံမယျဆိုရငျ ဒါက ရနှဈနီးပါး
ကွာပွီးနောကျ ပထမဆုံး ပွနျလညျတှဆေုံ့ရိုကျကူးမယျ့ရုပျရှငျကားလညျးဖွဈပါတယျ။
အခုလကျရှိမှာတော့ Lee Jong Suk ဟာ Hymn of Death ဇာတျကားသဈကို ရိုကျကူးနဆေဲကာလဖွဈပွီး မငျးသမီး Kim Ji Won ကိုတော့ မကွာသေးခငျကမှထှကျရှိခဲ့တဲ့ “Detective K: Secret of the Living Dead.” ဇာတျကားမှာမွငျတှခေဲ့ရပါတယျ။
သူတို့နှဈယောကျ ဒီဇာတျလမျးကိုလကျခံရိုကျကူးမလားဆိုတာတော့ နောကျထပျသတငျး တှစေောငျ့မြှျောအားပေးကွပါဦး။